Ihe ọhụrụ Nook GlowLight 3 rutere na ihuenyo ink kọmputa | Akụkọ akụrụngwa
Ma ọ bụ na ezinụlọ NooK nke akwụkwọ elektrọnik sitere na Barnes & Noble, atụghị ndị na-agụ n'anya n'anya ogologo oge na ihe atụ ọhụụ ebe ọ bụ na e mepere GlowLight Plus na 2015 ma ugbu a, a malitere Nook ọhụrụ a. Ọ bụ Nook GlowLight 3 ma emezigharị ya kpamkpam iji gboo mkpa ndị na-agụ akwụkwọ, n'etiti mgbanwe ndị kachasị ama anyị kwuru banyere nke ọhụrụ electronic ink / electronic akwụkwọ ngosi.
O doro anya na ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ụdị nke gara aga na nso na n'okwu a anyị nwere otu 6 anụ ọhịa ahụ na 300 ppi nakwa na ọ bịarutere n'ụzọ zuru ezu iji zere echiche, obodo kwụụrụ nke ihe karịrị ụbọchị 50 maka ụgwọ batrị zuru ezu na o doro anya na njikọ WiFi / b / g / n WiFi, nke na-enye ohere ibudata akwụkwọ na ntanetị.
Ihe anyị kwuru ma gosipụta banyere Nook ọhụrụ a bụ ihuenyo ahụ. Na nke a, anyị nwere ihuenyo ọzọ na-abụghị LCD na ink kọmputa bụ ike ya ọzọ, na mgbakwunye na nke a na ihuenyo ọ na-agbakwunye etiti roba na bezels mechiri emechi, ọ nwere njikọ microUSB maka iweghachi, o nweghi njikota Bluetooth, o nweghikwa nkpu 3,5 mm maka ekweisi ma gbakwunye mgbanwe banyere ọnọdụ nke bọtịnụ ahụ. Banyere bọtịnụ ndị a, anyị ga-egosipụta na enweghị mmalite mmalite na ụdị ọhụrụ nke Nook. Nnwere onwe dị ezigbo mma ma dịka anyị na-ekwu na ọ nwere ike ịnọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ na-enweghị mkpa ịbụ shit.
Ahụ bụ ihe dị iche na ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya na ihuenyo mgbe anyị na-ekwu maka mgbanwe karịa nke gara aga, ịnwe ọnọdụ abalị nke na-agbakwunye na ụda oroma iji chebe anya anyị na-eme ka ọ bụrụ ezigbo enyi maka ịgụ akwụkwọ ogologo. pre-sale na-ama na-emeghe na Weebụsaịtị Barnes & Noble.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Ihe ọhụrụ Nook GlowLight 3 biara na ihuenyo ink
Ọ bụghị ihe niile bụ ozi ọma na mmelite na-esote nke Playlọ Ahịa Google Play